Archives des Sampana - Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
Ahitana sampana efatra ny Afafi – FET : Afafi, EKA, VK ary IK
IK / VK
Indro atolotra antsika ny hira fanevan’ny JNE hatao any Morondava ny 23 – 28 aogositra 2017 Entanin’ny Fiombonana Zahay ankizy Katolika, maneho hafaliana Voairaka, hitory Vaovao Mahafaly e Ireo namanay, izay mbola variana Tianay...
IK / Vaovao
Fihaonam-be nasiônalin’ny ankizy : any Morondava ny fotoana
Hotanterahina any Morondava ny 23 ka hatramin’ny 28 Aogositra 2017 ny andiany faharoa amin’ny Fihaonam-be nasiônalin’ny ankizy. “Ankizy Katolika miara-dia amin’i Masina Maria, mitondra ny namany mankany amin’i Jesoa” no lohahevitra iompanan’io hetsika io...
Fiofanana / IK
Ny fanabeazana ao amin’ny Irak’i Kristy
Ny Irak’i Kristy dia ny ankizy madinika entanin’ny Baikony : Mivavaka, Mandray an’i Jesoa, Mahafoy tena, Ho Apôstôly. Ny fanabeazana ny Herim-pon’ny Iraka no imasoana ao. Matetika izay handreseny ny hakamoana no atao. Beazina...
Iraka no iantsoana ny ankizy ao amin’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora. Iraka izy ireo satria nantsoin’i Kristy an-tsitrapo hampiray ny fanolorany sy ny vavaka ataony miaraka amin’ny Azy. Ary irahiny hitondra ny Hafany ho an’ireo...